Bitmoji anaghị arụ ọrụ na gị iPhone? Nke a bụ ndozi ahụ! - Payette Gaanụ n’ihu - Iphone
esi eweghachi email ehichapụ site na iphone
gbanyụọ elekere apple 4
iphone 6 na ọnọdụ mgbake agaghị eweghachi
Bitmoji anaghị arụ ọrụ na gị iPhone? Nke a bụ ndozi!
Bitmoji agaghị arụ ọrụ na iPhone gị ma ị maghị ihe ị ga-eme. Bitmoji bụ ngwa na-enye gị ohere ịmepụta emojis obi ụtọ na nke onwe, yabụ ọ na-akụda mmụọ mgbe ị na-enweghị ike izipu ha. N'isiokwu a, m ga-egosi gị esi gbanye Bitmoji kiiboodu ma kọwaa ihe ị ga-eme mgbe Bitmoji anaghị arụ ọrụ na iPhone gị.
Kedụ ka m ga-esi gbanye kiiboodu Bitmoji?
Iji zipụ Bitmojis na ndị enyi na ezinụlọ gị, anyị kwesịrị ijide n'aka na agbanyere Bitmoji keyboard mgbe ị wụnyechara ngwa Bitmoji. Iji gbanye kiiboodu Bitmoji, malite na imeghe ya Ntọala ngwa. Pịa General -> kiiboodu -> Ahụigodo -> Tinye Nbudata Ọhụrụ.
N'okpuru 'Igodo nke atọ,' pịa Bitmoji ịgbakwunye Bitmoji gị ndepụta nke ahụigodo. Na-esote, pịa Bitmoji na ndepụta gị nke ahụigodo wee gbanye mgba ọkụ na-esote Nye ohere zuru ezu. You ga-amata na keyboard Bitmoji dị na mgbe mgba ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ!
N'ikpeazụ, mgbe ịgbanwu mgba ọkụ na-esote Kwe Ka ịnweta zuru ezu, pịa Kwe ka mgbe ozi Ekwe ka nnweta zuru ezu maka kiiboodu “Bitmoji”? na egosiputa na ihe ngosi nke iPhone gi. Ozugbo ịgbanyere keyboard Bitmoji, laghachi na ngwa Ozi wee hụ ma Bitmojis gị ọ dị.
Keyboard Bitmoji dị, mana enweghị m ike ịchọta ya!
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị gbanyere keyboard Bitmoji, ọ ga-esiri gị ike ịchọta, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ ị na-eji ngwa ahụ. Iji nweta kiiboodu Bitmoji, bido site na imeghe ngwa ịchọrọ iji zipu Bitmoji. Aga m eji ngwa Ozi iji gosipụta.
Mepee mkparịta ụka na enweta mpaghara ederede iMessage iji nweta kiiboodu nke iPhone gị. Na akụkụ akaekpe aka ekpe nke keyboard n'akụkụ ogwe ohere, pịa akara ngosi dị ka ụwa . Oghere emoji ọkọlọtọ ga-apụta (belụsọ ma ị gbanyụrụ ya).
Na-esote, pịa akara ngosi ABC na akụkụ aka ekpe aka ekpe nke keyboard iji nweta Bitmojis gị omenala. Pịa na Bitmoji ịchọrọ izipu iji detuo ya.
N'ikpeazụ, kpatụ ubi ederede iMessage wee pịa Tapawa mgbe nhọrọ gbapụta na ihuenyo gị iPhone. Bitmoji gị ga-apụta n'ọhịa ederede ma ị nwere ike izigara ya enyi gị ma ọ bụ onye ezinụlọ gị.
otu esi agbanwu iphone na -enweghị bọtịnụ mkpọchi
Ahụigodo ahụ dị, mana Bitmoji anaghị arụ ọrụ! Kedu ihe m ga-eme?
Ọ bụrụ na ịgbanye keyboard, mana Bitmoji ka na-agaghị arụ ọrụ, iPhone gị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ngwanrọ. Nchọpụta usoro nchọpụta dị n'okpuru ga-enyere gị aka ịchọpụta ma dozie nsogbu ahụ nke ọma!
Gbanyụọ iPhone gị ma laghachi azụ
Ihe ngbako nsogbu mbu anyi nwere bu igbanwe iPhone gi wee laghachi ozo. Gbachi iPhone gị na-enye ohere ka obere ihe omume niile na-agba n’okirikiri reboot ma bido ọzọ. Ọ bụrụ na a obere software glitch mere na ndabere nke gị iPhone, ibidogharịa gị iPhone nwere ike dozie nsogbu ahụ.
Iji gbanye iPhone gị, malite site na ịpị na ijide ya Leepra / Tetanụ bọtịnụ, nke a na-akpọkarị ike bọtịnụ. Mgbe sekọnd ole na ole, akara ike ike na okwu ndị ahụ Mia gapu aka ga-egosi na ngosipụta nke iPhone gị. Swipe akara ngosi ike uhie site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji gbanyụọ iPhone gị.
Chere 30-60 sekọnd, wee pịa ma jide Leepra / Tetanụ bọtịnụ ruo mgbe akara Apple gosipụtara na ngosipụta nke iPhone gị iji gbanwee ya.
Melite The Bitmoji App
Na-esote, gbaa mbọ hụ na imelitela ụdị nke ngwa Bitmoji dị ọhụrụ. Mmepe na-emelite ngwa ha mgbe niile iji dozie nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ngwanrọ ngwanrọ. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe mgbe ochie mbipute nke ngwa, i nwere ike na-enweta ndị na teknuzu mbipụta.
Iji lelee maka mmelite na ngwa Bitmoji, gaa na Storelọ Ahịa App. Kpatụ Mmelite na akụkụ aka nri ala nke App Store na ndepụta nke mmelite ngwa dị ga-apụta na ngosipụta iPhone gị. Ọ bụrụ na mmelite dị maka Bitmoji, pịa acha anụnụ anụnụ Mmelite bọtịnụ n'aka nri nke ngwa ahụ.
otu esi edozi ihuenyo iphone adịghị anabata
Mmelite na kacha ọhụrụ mbipute nke iOS
Ọ bụrụ na ị nwere ụdị nke ngwa Bitmoji kachasị dị ugbu a, mana ọ ka anaghị arụ ọrụ na iPhone gị, lelee ma ọ bụrụ na mmelite iOS dị. Mgbe ụfọdụ, a isi iOS update nwere ike ime ka kpọmkwem ngwa ọdịnala na-adịghị arụ ọrụ. N'ezie, mgbe Apple wepụtara iOS 10, keyboard Bitmoji kwụsịrị ịrụ ọrụ maka ọtụtụ ndị ọrụ iPhone mgbe ha wụnye melite.
Iji lelee ma ọ bụrụ na mmelite iOS dị, mepee Ntọala ngwa ma pịa General -> Mmelite ngwanrọ . Ọ bụrụ na mmelite iOS dị, pịa Ibudata na Wụnye na ala nke menu Nwelite ngwanrọ. A ga-akpali gị ịbanye passcode iPhone gị tupu nbudata iPhone gị ma wụnye mmelite iOS kachasị ọhụrụ.
Mgbe emelitere iOS, pịa Wụnye ma ọ bụrụ na iPhone gị anaghị emelite onwe ya na akpaghị aka. Jide n'aka na iPhone gị abanyela na isi iyi ike ma ọ bụ nwee opekata mpe 50%, ma ọ bụghị na iPhone gị agaghị enwe ike iwunye mmelite iOS. Mgbe gị iPhone installs update, gị iPhone ga-reboot.
Igodo Bitmoji na-arụ Ọrụ Nke Ọma!
’Ve melitela keyboard nke Bitmoji ma ị nwere ike ịmalite izipu emojis omenala na kọntaktị gị niile. Anyị na-agba gị ume ịkekọrịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta ka ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị mara ihe ị ga-eme mgbe Bitmoji anaghị arụ ọrụ na iPhone ha ma ọ bụrụ na ha kpebie ịwụnye ngwa ahụ. Daalụ maka ịgụ isiokwu a, enwere m olileanya ịnụ n'ọnụ gị na ngalaba ndị kwuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ iPhone ọ bụla!